RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org
Subject: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Thu Nov 20, 2008 11:17 pm
၀ိုင်းကန်တာက TP က လား NYP ကလား။ မြင်တဲ့သူတွေ မြင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ၀ိုင်းဆွဲလို့ ထိမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါဆို ပရိတ်သတ် မိန်းကလေးများသာရှိတဲ့ ဘက်ကို TP အသင်းသားတစ်ယောက် (ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားပြောသလို နာမည်နှင့်တကွသိပါတယ်) က 'စောက်ကောင်မတွေ ဆင်းခဲ့စမ်း အားလုံးသတ်ပစ်မယ် ' လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ပါလဲ။ သူရဲဘောကြောင်တာလား။ လူတွင်ကျယ်လုပ်တာလား။ TP ကွလို့ ပြောချင်တာလား။ ၄င်းနောက် NYP မှ 2nd Yr မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုလည်း သတ္တိရှိစွာ ကြည့်ပြီး ယောကျာ်းပီသစွာ ထပ်မံကာ 'စောက်ကောင်မ' ဟု ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောဆို သွားပါတယ်။ Daywalker ရေးသားထားသော TPmyanmar.org မှ မြန်မာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဆန်ဆန် Post တွင် အထက်ပါ ကိစ္စများမပါဝင်ပါ။ မသိတာလား။ မသိရင်မရေးပါနဲ့ ။ ဖုံးထားတာလား။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ကိုယ်မှားရင် မှားတယ်လို့ မတောင်းပန်ချင်နေပါ။ ဘူးခါငြင်းနေတော့...
ဘောင်းဘီးချွတ်ပြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ သေချာသိရဲ့လား။ ခင်ဗျား Organizer ကိုသေချာအောင်မေးကြည့်ပါ။ ဒဏ်ရာပြတာလား၊ ဟိုဟာပြတာလား ဆိုတာကိုပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Daywalker ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ဆက်လတ်မဆွေးနွေးလိုပါ။ အထက်ပါ အချက်များနှင့် လုံလောက်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
ယခင်နှစ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီးပြောရလျှင် NYP နှင့် TP အသင်း ပရိတ်သတ်တွင် မည်သူက ဆူညံစွာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း အားပေးခဲ့သနည်း။ NYP တဲ့လား။ Daywalker ခင်ဗျား ဟာသပြောနေတာလား။ မသိလို့ ရမ်းတုပ်တာလား။ မနှစ်က လာကြည့်တဲ့သူတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ TP ဆိုပြီးထပ်သိကြတာလေဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ မင်းသားလေး အသားနဲနဲမည်းမည်း(သူအမည်းဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း နာမည်နဲ့ တကွသိတယ်ဗျ) ကောင်က ဘောလုံးကန်လို့ ထိတာကို လက်ပါခဲ့တယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ နောက်တန်းကစားသမားတစ်ဦးကို ဆောင့်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ပရိတ်သတ်တစ်ဦးက တံမြက်စည်းကို ( စုစုပေါင်း တစ်ချောင်းတည်းရှိသော တံမြက်စည်းဖြစ်ပါသည်။ Daywalker ပြောသလို တံမြက်စည်းများတော့ မဟုတ်ပါဘူး။) သူ့ ဟာသူ သူဒူးနဲ့ သူရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ မည်သူ့ ကိုမျှ ထိခိုက်မှုမရှိသလို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ ၄င်းက NYP ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော်တို တစ်ပွဲလုံး ကွင်းအနားကတ်၍ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း Insulting လုပ်နေသော သက်ကြီးရွယ်အို TP ပရိတ်သတ်များ ဒဏ်ကိုသည်းခံပြီးပွဲပြီးအောင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ TP က ဘောလုံးကို ခြေထောက်တင်မကဘူး လက်လည်းပါတတ်လို့ ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် လက်ခုတ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှမြည်တယ်လေ။ NYP က TP နဲ့ Interpoly မှာ မဖြစ်မနေကန်ရတာ. NYP ဖက်ကလက်ကတော့ ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲရှိနေတယ်။ TP ဖက်လာတီးတော့မှ မြည်တာလေ။ မောင်းတီးသလို ပေါ့ကွာ ဟားဟား... မောင်းကသူနေရာသူနေတာ မောင်းတံကလာတီးတာ.
ထပ်ပြီး ဟုတ်ပါသေးတယ် Daywalker . ခင်ဗျား အထက်က အပြုအမူတွေကို သိက္ခာရှိတယ်။ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ ထင်နေရင် NYP ကပြောတာတွေကို ဆက်ကျင်ဘက်မြင်နေတာ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ မဆန်းပါဘူး။
Last edited by Admin on Sun Nov 23, 2008 4:07 am; edited 1 time in total
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Thu Nov 20, 2008 11:29 pm
aeee.... TP ka ae loh kyi write htar tar koe.....
ma hote tat har twae ko write htar tar tot ma kg bu lay....
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Fri Nov 21, 2008 12:41 am
အင်းလေ။ TP ကလူတွေက လုပ်တုန်းကလုပ်ပြီး ၀ိုင်းပြောမှ လျှောက်ပြောတာတော့ မကောင်းပါဘူး။
လုပ်ပြီးတော့မှ အတင်းငြင်းနေတယ်။ဘာပဲပြောပြောသိတဲ့သူ ကသိပြီးသားပါ။
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 1:08 am
အင်း...ဟုတ်တယ်။ သွားပြောနေလည်းအလကားပါပဲ။ လူ့ပါးစပ်ဆိုတာကပိတ်လို့မ, မရတာကိုး။
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 3:53 am
ဥပမာပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် မှန်လည်းမှန်ပါတယ် NYPမောင်းက သူ့ဖာသာသူ နေတာပါ TPမောင်းတံက တမင်လာရိုက် တာပါ အဲဒီလိုရိုက်မိလို့ ဒီနေ့ အထိ NYPမောင်းကြီးက မြည်နေတုန်းပါပဲ မိုက်ရိုင်းလှတဲ့ အက်ကွဲဆူညံသံတွေနဲ့ NYPian website forum ဆိုတဲ့ လေဟာနယ် ထဲမှာ မြည်နေတုန်းပါပဲ Echo တွေပါ သံယောင်လိုက်သံတွေပါ မြည်နေတုန်းပါပဲ။ TPမောင်းတံကြီးက ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ အက်ကွဲသံတွေ သံယောင်တွေ လိုက်မနေပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေတခု ရှာနိုင်ဖို့ ခက်မာမာ ပဲရပ်တည်နေဆဲပါ။ ဟုတ်တယ်။ မောင်းတံရိုက်ချက် ပြင်းထန်လွန်ကဲခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရိုက်ခံရတဲ့ NYPဘက်မှာ အဲဒီနေ့က ကိုယ့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူ သွေးသောက် အချင်းချင်း ကာကွယ်ခုခံပေးခဲ့တဲ့ ယောက်ျားကောင်း ဘယ်နှယောက်ပါခဲ့သလဲ။ ဘောလုံးအသင်းမှာ ယောက်ျားအမည်ခံ ၁၅ ယောက်ထက်မနဲ ပါခဲ့တယ်။ အမြွှာညီအကို ၂ယောက်ကိုလေးစားပါတယ်။ ကိုယ့်ညီကိုထိလို့ ခေါင်းငုံ့မခံ တန်ပြန်ရဲ တဲ့ယောက်ျားစိတ် ရှိတယ်။သူတို့လိုမျိုး ဘယ်နှယောက်ရှိခဲ့လဲ။ ရန်ပွဲကိုဟိုးအဝေးကနေ ကြည့်နေခဲ့ပြီး အားလုံးပြီးမှ Internet Website ပေါ်မှာ လူတိုင်းသိအောင် အခြားကျောင်းကမိန်ကလေးတွေကို ယုတ်မာအောက်တန်းကျတဲ့ စကားတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ယောက်ျားစိတ်ဓာတ်လား။ TPဘက်မှာ NYPဘက်က မိန်းကလေးတွေကို ဆဲခဲ့တဲ့သူ ရှိမှာပါ။ ဟုတ်တယ်။ ယောက်ျားမပီသဘူး။ အေး ငါတို့ဆဲတာ မြန်မာ ဘာသာစကားနဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပဲ ဆဲခဲ့တာ။ Internet မှာ ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကားနဲ့ တစ်ကမ္ဘာ လုံးသိအောင် သိက်ခါ မချခဲ့ဘူး။ ဒါလားကွ ယောက်ျား။ မင်းတို့ ကျောင်းကမိန်းကလေးတွေကမှ မင်းတို့ထက်ပိုပြီး ကာကွယ်ရမဲ့ တာဝန်ကိုသိသေးတယ်။ အားလုံးပွဲပြီးသွားမှ သူခိုးပြန်မှ ထိုးကွင်းလာမထနဲ့။ ငါတို့အသင်းသားထိလို့ လက်သည်းစိတ် လက်ထိပ်နာတယ်။ ငါတို့တွေဝိုင်းခဲ့တယ်။ TP Myanmar ကွ။ မစည်းလုံးပဲနဲ့ မော်ကွန်းမရှိဘူး။ ငါတို့ဘက်ကရမ်းကားပါတယ်။ မင်းတို့ပြောချင်သလိုပြောနိုင်တယ်။ အရာအားလုံးလဲ မင်းတို့တံတွေးခွက်မှာ မျောခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမဆန် တဲ့စကားလုံးတွေကြားမှာ ငါတို့ဒူးထောက်မယ်တော့ မထင်နဲ့။ ဂရုကိုမစိုက်ဘူး။ မင်းတို့တွေကို ငါတို့ လုပ်ခဲ့မိလို့ မင်းတို့ဆီမှာမကျေနပ်ချက်တွေရှိမယ်။ နားလည်တယ်။ အချိန်မရွေး ကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရှင်း။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားတော့ဆန်ပစေ။ ပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဖက်သက် မိန်းမဆန်ဆန် အပုတ်ချ မှုတွေ၊ အဖြစ်မှန်ကိုချဲ့ကား လုပ်ကြံပြောဆိုတာတွေကို ရပ်သင့်တာရပ် ဖျက်သင့်တာဖျက် ယောက်ျားလို့ ကို့ကိုယ်ကို ထင်မှ ပြသနာကိုလာရှင်းပါ။ ယောက်ျား ပီပီ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခြားခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အသင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပါပဲ။
Admin-အားလုံးသိအောင် ခင်ဗျားတို့ website မှာ register လုပ်ပြီး တင်လိုက်တယ်။ ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Bann ချင် Bann လိုက်ပါ။ ထပ်ပြီးဖတ်ချင်သေးရင်တော့ tpmyanmar.org မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်... ... ... ... ...
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 6:06 am
attn:>>moeငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေတခု ရှာနိုင်ဖို့ ခက်မာမာ ပဲရပ်တည်နေတယ် ဆိုပြီး TP က NYP's form မှာဘာလို. လာဆဲ နေပါလဲ။
ငြိမ်းချမ်းတယ် ဆိုတာအဲ့ဒါကို ဆိုလိုပါသလား။
admin ရေးထားတဲံ့post မှာရိုင်းပြတာ လုံးဝမပါ ပါဘူး။
TP ကအသင်းသားထိလို့ လက်သည်းစိတ် လက်ထိပ်နာတယ်။
ဒါပေမယ့် NYP ကလူတွေကတော့ ကိုယ့်ကျောင်းက လူကိုထိလို. မနာရဘူးပေါ့။??
NYP ကလူတွေလဲ ကိုယ့်ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ကိုထိရင် မခံနိုင်ဘူး။
ဆဲတုန်းကဆဲခဲ့ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိတာတော့ မခံနိုင်ဘူးပေါ့။ ။ ??
အားလုံးက အခုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတခု မှာပါ။
ကိုယ်တွေးတဲ့အတိုင်း ဖွင့်ပြောခွင့် လူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။
ဒါက လူ.အခွင့်အရေးပါ ။
ဒါကို ပိတ်ပင်တာ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးလိုလူမျိုးတွေသာလုပ်တာပါ။
Subject: attn>ancksunamun Sat Nov 22, 2008 2:39 pm
TP Myanmar forum ထဲမှာ ဒီအကြောင်းအရာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိုက်ရိုင်းအောက်တန်းကြတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံး ပါခဲ့တယ် NYP ကကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ဦးဦးကို ဘောလုံးပွဲနဲ့မဆီမဆိုင် personally လှောင်ပြောင်အပုတ်ချတဲ့ စကားလုံး ပါခဲ့တယ်ဆိုရင် ချက်ခြင်းထောက်ပြပြီး ပြောလိုက်ပါ။ NYPian admin ရေးတဲ့စာပိုက် တွေမှာမိုက်ရိုင်း တဲ့အသုံးအနှုံး မပါဘူးဆိုတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းကို Forum မှာ Title တပ်လိုက်ကတည်းက Let's talk about dogs လို့တပ်ထားတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာပါဝင်လာတဲ့ အဲဒါတွေကလည်း ဖတ်ရှုသူတိုင်း စာရေးသူရဲ့အဆင့်အတန်းကို ထင်ထင်ရှားရှား သိမှာပါ။ C-box ထဲမှာဆဲကြတယ်။ ဟုတ်တယ်။ မိုက်ရိုင်းတယ်။ အဲဒါတွေကိုမခံနိုင်လို့ C-box ပိတ်လိုက်တယ်။ Old message တွေ delete လုပ်ပစ်တယ်။ good job ပါ Admin ။ C-box ကိုရိုင်းစိုင်းလွန်းလို့ ပိတ်ပစ်တယ်ဆိုရင် forum မှာတင်ထားတဲ့ တွေကိုရော ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။ ဒီအပြုအမူတွေကို ရပ်နိုင် မရပ်နိုင်ဆိုတာ မင်းတို့ တစ်ဦးခြင်းစီရဲ့ ယောက်ျား ပီသမှုအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ မင်းတို့လည်းမင်းတို့ ကျောင်းသားဘက်ကနာတယ် တုန့်ပြန်ချင်တယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ယောက်ျားပီပီ အဲဒီနေ့က တုန့်ပြန်ခဲ့လေ။ တချို့တွေဆို ဘာလို့ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေခဲ့လဲ။ ယောက်ျားတွေမဟုတ်လား။ ပွဲပြီးမှ နောက်ကနေသံယောင်လိုက်အော်ဟစ်တာက မိန်းမတွေအလုပ်ပါ။ (ချွင်းချက်-ဒီforum တခုလုံး NYP ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတွေသာ အစအဆုံး ဦးစီးရေးသားနေတာဆိုရင်တော့ နားလည်လက်ခံပေးပါတယ်။) အခုအချိန်မှာ ငါတို့ကျောင်းသားဘက်ကနာပါတယ်ဆိုပြီး မှာအော်နေလို့ မင်းတို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဒဏ်ရာတွေ
သက်သာလာနိုင်မှာလား။ အဲဒီနေ့က မင်းတို့အားလုံး မင်းတို့သူငယ်ချင်းကို ယောက်ျားပီပီ တက်ညီလက်ညီကာကွယ် ခဲ့ရင် မင်းတို့သူငယ်ချင်း ဒီလောက်မနာကျင် ခဲ့ဘူး။ မိန်းကလေးလောက်တောင် သတ်တိ ရှိခဲ့ကြလား။ အခုအချိန်မှာ တော့အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ။ မြန်မာအချင်းချင်း ဒီထက်ပိုပြီး ရှေ့ဆက်ဖြစ်ဖို့လဲ မသင့်တော်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ဆီမှာကျန်နေသေးတဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းချင် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမဆန်ဆန် အပုတ်ချစကားနာ ထိုးတာတွေကို ပိတ်၊ ငါတို့ယောက်ျားတွေပါ ဆိုပြီးတော့ လာရောက်ဖြေရှင်းကြပါ။
Subject: attn>ancksunamun Sat Nov 22, 2008 2:40 pm
မင်းတို့ ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြောဆိုရေးသားခွင့်ကို ငါတို့မပိတ်ပင်ပါဘူး။ ခုနကပြောသလို မင်းတို့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ယောက်ျားပီသမှု အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ စစ်အစိုးရ တွေ ဘာမှမဆီမဆိုင်တာ တွေနဲ့ ဥပမာ မပေးပါနဲ့။ ဒီအကြောင်းပြောချင်ရင် Singapore မှာကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်အနာခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ TP Myanmar ကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေအကြောင်း အရင်စုံစမ်း လိုက်ပါ။ သူတို့လိုအနစ်နာခံမှုတွေ လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါလဲမလုပ်နိုင်ဘူး မင်းတို့လဲမလုပ်နိုင်ဘူး ပြီးတော့ တနေ့တာ အလုပ်ထဲမှာပဲပျော်မွေ့ ကိုယ့်ကျောင်းသကြန်တောင် မကူညီ အားမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ NYP graduates တွေလဲမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ငါတို့ကျောင်းစင်မြင့်ကစလို့ Singapore အာဏာပိုင်တွေရဲ့ရှေ့ တရားမျှတမှုမရှိ တဲ့ သံရုံးရှေ့ အထိ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့ကြတဲ့ ငါတို့ TP Myanmar ကျောင်းသားဟောင်းတွေအကြောင်း ယောက်ျားအစစ်အမှန်တွေရဲ့ အကြောင်းကို အရင်သိအောင်လုပ်ပါ။ TP Myanmar ဆိုတာ ဘယ်လို အဖွဲ့အစည်း လဲ ဆိုတာသိ အောင် အရင်ကြိုးစားလိုက်ပါအုံး။
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 6:16 pm
ဟုတ်တယ် TP ကလူတွေကအာဏာပိုင်တွေရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတာ၊လူအခွင့်အရေးပိတ်ပင်
ဒါပေ့မယ် ကိုယ်တိုင်ကျတော့ လိုက်ပိတ်ပင်နေတယ်လား။
TP Myanmar ကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေအကြောင်း ကိုတခွန်းမှတောင်ထည်.မပြောရသေးပါဘူး။
နောက်ပြီး TP=DOGS ဆိုတာကိုစရေးတာ ယောက်ျားလေးတယောက်မဟုတ်ဘူး။
အဲ့တောmoe ရေးခဲ့တဲအတိုင်းပဲပေါနော်။("ချွင်းချက်-ဒီforum တခုလုံး NYP ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတွေသာ အစအဆုံး ဦးစီးရေးသားနေတာဆိုရင်တော့ နားလည်လက်ခံပေးပါတယ်။")
TP ကတချို.သူတွေက NYP's shout box ထဲမှာဆဲဆိုသွားတယ်၊စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။
NYP က ယောက်ျားလေးအချို.ကယောက်ျားပီပီသသမကျေနပ်ရင် တယောက်ချင်းတွေ.မယ်၊အုပ်စုနဲ.ဆိုလဲရတယ် လို. ပြောပြီး PH NO. ပေးခဲ့တာတောင် PH မဆက်ခဲ့ပါဘူး။
shout box ထဲမှာပဲ ဆက်ပြီး မျိုးဆုံ ဆဲဆိုသွားတာပါ။
ဒါဆို ဘယ်သူက ယောက်ျားမပီသ ခဲ့တာလဲဆိုတာ သိပါပြီနော်။
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 6:27 pm
NYP မှာလဲရှိတယ်၊ TP မှာလဲရှိတယ်။
ဒါကိုလိုက်ပြီး ဟိုလိုမမြင်နဲ. ဒီလိုမမြင်နဲ.လိုက်ပြောလိုမရသလို.၊ဟိုဟာမရေးနဲ.ဒီဟာမရေးနဲ.လိုက်ပြောလို.မရပါဘူး။
NYP က NYP's်form ပေါ်မှာရေးထားတာမကျေနပ်ရင် TP က ကိုယ်ထင်မြင်ချက်ကို TP's forum ပေါ်ပြန်ရေးပေါံ့။
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 8:02 pm
TP Dogs, TP girls are pregnant, Prostitudes ဟူ၍ရေးသားချက်များ Personally အရတိုက်ခိုက်ရေးသားချက်များဟာ ယောက်ျားလေးများ၏ အရေးအသားမဟုတ်ပါ။ဒီလိုစတင်ရေးသားသူဟာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ ဟုပြောဆိုသည့်အတွက် ကျနော်စကားနှင့်ကျနော် ချွင်းချက်ဟူ၍ ထားခဲ့သိအတိုင်း ယခု NYP forum တွင်ရေးသားနေခြင်းကို အားလုံးသော forum မှ NYP ကျောင်းသူများကို နားလည်သောအားဖြင့် မိန်းကလေးများနှင့်အပြိုင် ရေးသားပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ chat box ထဲတွင် ဆဲဆိုမှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး အထက်ပါ စာပေးပို့သူ အမျိုးသမီး (ancksunamun) နှင့်တကွ forum ထဲမှာရှိကြသောအားလုံးသော မိန်းကလေးများ ကိုလည်း ကျနော်၏ရေးသားချက်များကို နားလည်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်။( Forum ထဲမှာ ယောက်ျားတွေပါ ရေးနေတယ်လို့ ထင်မိတာကိုက ငါ့အမှား)။ ယခုပိတ်လိုက် တော်ကြာ Delete လိုက် ဖြစ်နေတတ်သော Chat Box ကြီးမှ ယောက်ျားစစ်စစ်၏ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုကိုလည်း အရေးတယူ မရှိခဲ့မှုအပေါ် ခွင့်လွှတ်ကြစေလိုပါသည်။ နောင်များမှာ ဖုန်းနံပါတ် ကို နာမည်အရင်း နှင့်တကွ Forum Topic ပေါ်တွင် ထင်ထင်ရှားရှား ရေးသားပေးပို့စေချင်ပါသည်။ ပြသနာကို ဖြေရှင်းရန် ကျနော်တို့ အသင့်ရှိနေစေရပါမည်။
NYPian ရေးသားချက်များကို ဘယ်သောအခါကမျှ မပိတ်ပင်ခဲ့ပါ။ ယောက်ျားများဖြစ်ကြလျှင် ရေးသားရန် မသင့်တော်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (အားလုံးမိန်းကလေးတွေရေးတာဆိုမှတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ရေးပေါ့) TP Myanmar Forum တွင်ရေးသားမှုများ NYP forum ထက်နဲပါးမှုကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ကြစေချင်ပါသည်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ခန်းနားသော Topic ကြီးများနှင့် အပုတ်ချ ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကို TP Myanmar Forum ပေါ်တွင် ဘယ်သောအခါမျှ Post ပေးမည်မဟုတ်ပါကြောင်း။
မဂ်လာအပေါင်းနဲ့ အစဉ်အလာ ကောင်းနိုင်ပါစေ.
Byasymbol of unity
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 8:21 pm
ok..now u can shut up..and NYP's forum is in peace again =] so gud
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 22, 2008 11:04 pm
innn hote tal.... aye chan twar p....
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sun Nov 23, 2008 4:03 am
မိုးဆိုတဲ့ ညီလေးရေ. NYP ကိုတစ်ယောက်တည်းလာရဲတယ်ကိုး။ Forum ကိုပြောပါတယ်။ လေးစားပါတယ်။ အရေးအသားကောင်းပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တော့ မတွေ့ ရတာ ၀မ်းနည်းစရာပဲ။ NYP Forum ပေါ်မှာ ရေးထားတာက NYPians တွေရဲ့ TP အပေါ်မှာ ကဲ့ရဲ့မှုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီForum က ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းထင်တိုင်းကြဲလို့ ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ User တွေ တင်ထားတဲ့ Post တွေကို Forum စပြီး Create ကတည်းက တခါမျှ မဖျက်ပါဘူး။ admin စောက်ရူးလို့ အချက်ကျကျတက်ရေးလဲ ကျွန်တော်ဖျက်လို့ မရပါဘူုး။ ဒါမရေးရဘူး၊ ဒါပဲရေးရမယ်လို့ လဲ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။ You can post as long as rules are respected လို့ ပဲရေးထားပါတယ်။ Forum က powered by Nypians (users) ပါ။ not by admin or founder. TP forum ကိုတော့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ phone no. နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော့ပြောချင်တာက Cbox မှာ older messages ဆိုတဲ့ button ရှိပါတယ်။ အလကားထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ old posts တွေကိုဖတ်လို့ ရအောင်ထားတာပါ။ အလုပ်တခုကို တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်လေ့လာပါ။ Forum ရဲ့ Post တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ နာမည်များ Phone No. နှင့်တကွရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားအတွက် သီးသန့် တော့ ပြန်ရေးမပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက ခင်ဗျားတို့ က သူတို့ ရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှုကို မခံချင်ရင် ပြေရာပြေကြောင်း တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။ ခုတော့ Daywalker ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ Tp Forum ကြီးမှာ Info အမှားတွေကို သိဏ္ခာရှိရှိရေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ က ကျွန်တော်တို့ Cbox မှာမခံချင်အောင် ဗြောင်ကျကျငြင်းပါတယ်။ ပြန်ပြောရင် မခံနိုင်ပြန်ပါဘူး။ ထိုးမယ် ချမယ် ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ တကယ်တန်းဘယ်သူမှလည်း မထိုးကြပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကို လူမိုက်လို စိန်ခေါ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မတောင်းပန်ချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေးနေပါ။ တောင်းပန်ချင်တယ်ဆိုတယ် သတ်ဆိုင်သူ Organizer တွေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ခင်ဗျားတို့ Forum ပဲဖြစ်ဖြစ်။ NYP Forum ပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြီးသူကောင်းဆန်ဆန် တောင်းပန်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ထိုးမယ် (သို့ ) အထိုးခံချင်ရင်တော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ Mrt စီးပြီး Ang Mo Kio Mrt မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Yo Chu Kan Mrt မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆင်းလိုက်ပါ။ NYP ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါ။ ပြီးတော့ NYP South Canteen (Engineering Canteen) နားသွားပြီး တိုးတိုးအော်လိုက်ပါ။ ငါTPကကွ၊ NYPကို စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ။ မြန်မာလို အော်ပါ။ English လိုဆိုရင် ပိုဆိုးသွားမှာစိုးလို့ ။ လာရင်လည်းကြိုပြောပါ။ ကျောင်းပိတ်ရက်နဲ့ တိုးမှာစိုးလို့ ပါ။
ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမပြောဘူး။ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေး နေချင်လိုက်ပါ။
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sun Nov 23, 2008 10:45 am
Location : John's House
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sun Nov 23, 2008 2:20 pm
i juz wanna know something...TP=DOGS isagirl or guy?...if it isagirl....other may think that nyp girls r rude....i thought it wasaguy....i nvr heardagirl said that "tp got prostitutes"...juz want to make it clear...i dun wantabad name for the girls...
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sun Nov 23, 2008 2:47 pm
if u'raregistered user,u can check the other user's profile.click the "members" button.OK.
i aint sure if it's gal or guy too.but ineTP=DOGS user's profile,the user's gender is female.
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Mon Nov 24, 2008 2:00 am
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Mon Nov 24, 2008 2:28 pm
stop smiling.i dun wanna see ur posts or ur smiley faces in NYP's forum anymore.
i wonder why admin hasn't ban him yet.. ='(
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Tue Nov 25, 2008 1:43 am
how come moe is always smile???? so strange...
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Tue Nov 25, 2008 1:20 pm
he's smiling in sarcastic way..no strange at all.
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Wed Nov 26, 2008 1:59 am
orr... ga lo.. ga lo.... nar lae p...
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Sat Nov 29, 2008 12:45 pm
\_m/, on yr post... there r more than 1 gal... for everyone2noe...
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org Wed Dec 03, 2008 1:05 am
amt1991>>>>> what do u mean by that????
Subject: Re: RE: Daywalker FPost @ TP.Myanmar.org